Madaxweyne Trump Oo Ugu Baaqay Ilhan Cumar Inay Iscasisho | Berberatoday.com
Madaxweyne Trump Oo Ugu Baaqay Ilhan Cumar Inay Iscasisho
February 13, 2019 - Written by Berbera Today
USA(Berberatoday.com)-Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in Ilhan Cumar oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga kana mid ah Aqalka Senatka ay is casisho sababo la xidhiidha ereyo Yuhuud naceyb ah oo ay ku qortay boggeeda Twitterka.
“Yuhuud Naceybku meelna kuma laha Congresska dalka Maraykanka.”ayuu yidhi Madaxweyne Trump oo isaga laftiisa hore loogu eedeeyay hadalo qadaf ku ah isirka iyo dadka laga tirada badan yahay.
“Waa inay iska casishaa Kongresska amaba hubaal guddiga arrimaha dibada oo ay xubinta ka tahay.”ayuu yidhi Trump oo kutilmaamay cudurdaarka ay ka bixisay hadaladeeda Ilhan Cumar in uu yahay mid daciif ah.
“Waxa ay sheegtay waxa uu kaga yaalaa gunta hoose ee qalbigeeda,cudurdaarkeedana waa mid daciif ah oo aysan daacad ka ahayn.”ayuu sii raaciyay Donald Trump.
Ilhan Cumar oo ah gabar asalkeedu Soomaali yahay kana mid ah xubina ka ah Congresska dalka Maraykanka ayaa eedeyn kala kulantay xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuurigaba kadib markii ay sheegtay in ururka Aipac oo ah guddi u qaabilsan arrimaha Yuhuuda Maraykanka ee ay uu lacag ku bixiyo taageerada Israa’iil.
Afhayeenka Kongresska Nancy Pelosi iyo hogaamiyaasha kale ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa sidoo kale cambaareyay hadalka Ilhan waxana ay ugu baaqeen inay cudurdaar ka bixiso taasoo ay aqbashay Ilhan cudurdaarna ka bixisay hadaladii ay ku weerartay ururada Yuhuuda taageera.
Si kasta ha ahaatee, Ilhan Cumar ayaa u muuqata siyaasi geesi ah mana jirto illaa iyo hadda wax jawaab ah oo ay ka bixisay hadalka ka soo yeeray Madaxweyne Trump.